Kaltanka Madaxweynenimo Ee Reer Puntland :Kaalkacyo, Garoowe Iyo Qardho
(Hadhwanaagnews) Wednesday, January 09, 2019 16:29:48
Bal u fiirsado, Cabdilaahi Yuusuf waa madaxweynihii u horeeyey, waa reer Kaalkacyo, waxa ku xigay Cadde Muuse waa reer Qardho
soomaali dadka ugu ilbaxsan waa reer Puntland, sababta ilbax ku yihiin ma ku sheegaa, musharaxiintu waxay u tartamayeen sidii ay dadku codeynayaan, waxayna gaalaa baxayeen gobolada oo waxay la kulmayeen dadweynaha, dad badan baa is waydiinayey oo lahaa mar hadii xildhibaano koobani codeynayaan maxay waxan oo kharash ah isku galinayaan, hadii shax shax u samayn doorashadda oo sidii dadku cod bixinayaan dhoolatusyo isku muujin dee ma cid baa hadal hayn lahayd, dee waa maya.
doorashadda puntland si hoose oo diblimaasiyadaysan baa lagu soo saara cida noqonaysa madaxweynaha, caalamkana sawir fiican baa la tusaa,waxa isku dhiib dhiiba saddex magaalo oo kala ah Garoowe, Kaalkacyo iyo Qardho, doorba
qof saddexdaasi magaalo ka soo jeeda loo dhiibaa, caalamkana doorasho dimuqraadi ah baa la tusaa, heer umad bisil oo ilbax ah mooyee cid kale ma hawaysan karto.
Bal u fiirsado, Cabdilaahi Yuusuf waa madaxweynihii u horeeyey, waa reer Kaalkacyo, waxa ku xigay Cadde Muuse waa reer Qardho, waxa ku xigay Cabdiraxmaan Faroole waa reer Garoowe.
Markii labaad baa bilaabmay waxaanay dib ugu soo noqonaysa magaaladii ugu horeysay, waxa loo dhiibay Cabdiwali Gaas waa reer Gaalkacyo, imikana waxa loo dhiibay Siciid Denni waa reer Qardho, doorashada dambana waa reer Garoowe.
Ma cid baa igu diidan.
Waar ha loo qiro ilbaxnimo, bal u fiirso raga caalamka madaxka ka ah waa iyaga, haday tahay maxkamada aduunka, wasiirka socdaalka Canada, xildhibaanad Ilhaan. Adigu kuwo kale ku dar waa inta xasuustaye.